Hrad Nístějka z výšky, nke 2018 - Egwuregwu egwu zuru oke ahịa dị iche iche ahịa
HomeblogCastle Nístějka site n'elu, February 2018
Castle Nístějka site n'elu, February 2018	Hapụ ikwu
Nistějka bụ mbibi nke nnukwu ụlọ n'okporo ụzọ dị elu karịa confluence nke osimiri Jizera na Farský potok na n'ihu okporo ụzọ I / 14, na mpaghara otu aha ahụ. Ịnweta bụ na akara ngosi ndị nleta odo si Vysoké nad Jizerou. Sebul na-egosi na ọnụnọ mmadụ ọbụna na 17. st. A na-echekwa ogige ndị dị okirikiri, ogige ndị dị na mbara ala na ebe ndị e wusiri ike. A na-eche foduru nke nnukwu ụlọ ahụ dịka ihe ncheta omenala nke Czech Republic.
A kwenyere na e wuru ụlọ ahụ na ọkara mbụ nke narị afọ nke iri na anọ, ma ọ dịghị akwụkwọ edemede e chebere banyere mmalite ya. N'okwu ahụ, onye na-ewu ya ga-abụ Heník z Valdštejna, onye na-ede ihe kemgbe 1369 mgbe ọ gasịrị. Site na otu afọ ahụ bụ nke mbụ e dere banyere nnukwu ụlọ ahụ. Ọrụ ụlọ ahụ nwere ike ịbụ na ọ ga-echekwa ụzọ ala na ndagwurugwu Jizera. Maka ịbawanyewanyewanye nke ezinụlọ Wallenstein na enweghị akwụkwọ ederede, ọ siri ike ịchọpụta onye nwe ụlọ ahụ n'oge ahụ. O doro anya na e dere 1399 Hynek nke Valdštejn mgbe Nintetice na 1406 Henry. Otú ọ dị, na afọ na-esote afọ nke Henry nke Vartenberk dịla ebe a, nke 1404 nwetara na Castle Valdštejn. Na 1422, N'stějka na ndị isi nke Jenštejn na-ejide ya. Wenceslas nke Jenštejn na mgbe ọ gasịrị Mikuláš z Jenštejna. N'afọ ahụ, 1459 na-anwụ anwụ, a chọpụtakwara ihe ndị ọzọ n'ihi enweghị akwụkwọ edemede, ya mere, ihe ndị na-esonụ gosiri na nchọpụta e mere na 1958 na Museum nke North Bohemian dị na Liberec.
N'oge nnyocha ahụ, nke na-elekwasị anya karịsịa na mpaghara nke nnukwu ụlọ ahụ, e gosipụtara ngụkọta asatọ e dere ntọala, ya na obí ya nke nwere okpukpu abụọ ma ọ bụ atọ. N'akụkụ ndị a, ọ bụ taịlị na ihe ịchọ mma na obere ihe ígwè (karịsịa mbọ na jaws). Ihe mejupụtara nke ngwugwu na karịsịa usoro ha bụ onye nduzi nyocha nke ọkà mmụta ihe ochie PhDr duziri. Jaroslav Kavan kwubiri na ọ ga-abụrịrị na ọ nọ n'ọkara nke abụọ nke 15 mgbe ụlọ ahụ kwụsịrị. ọkụ nke narị afọ, bụ mgbe ala nile nke ụlọ eze dara.
A na-akwado okwu mbibi nke ederede ederede nke 1519, mgbe a na-akpọ Nistějka ka ọ bụrụ ebe tọgbọrọ n'efu. Ugbua na 1492 e nwere onye odeakwụkwọ Rajkert, Racek Cukr nke Tamfeld, onye bụ "onye nwe ihe nketa nke Navarre na ngwongwo nke Nesté". Ebe ọ bụ na a kpọtụghị aha ụlọ ahụ (dochie anya ngwongwo), a pụrụ ikwubi na Lástějka adịghịzi n'oge ahụ. Ọ bụ naanị na ọkwa nsị na-anọgide na-enwe ike na ọkụ na-eguzo n'azụ mberede nke Mikuláš z Jenštejn.
Nkọwa Bystrá nad Jizerou na Haje nad Jizerou n'elu oyi kpọnwụrụ Jizerou →